पाकिस्तानमा विमान दुर्घटना हुँदा सयभन्दा बढिको मृत्यु । - खबर २४ अनलाईन - खबर हरपलको
पाकिस्तानमा विमान दुर्घटना हुँदा सयभन्दा बढिको मृत्यु ।
९ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार १८:०४
पाकिस्तानको अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स (पीआईए) को विमान शुक्रबार दिउँसो पाकिस्तानको कराची शहरको सघन जनसंख्या भएको आवासीय क्षेत्रमा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ जसमा ९९ यात्री र ८ चालक दलका सदस्यसहित १०७ सवार थिए । यो विश्वास गरिन्छ कि ती सबै विमानमा सवार एक बैंकर सहित तीन व्यक्ति सहित मरे। हालसम्म ३७ जनाको शव अस्पतालमा आएको पुष्टि ३७ भएको छ । धेरै मानिसहरू हवाईजहाज खसेको कालोनीमा घाइते भएको अनुमान गरिएको छ । दुर्घटना पछि सडकमा उभिएका धेरै घर र सवारी साधनमा आगो लागेको थियो । । घटनास्थलमा उद्धार कार्य भइरहेको छ।
पाकिस्तानका राष्ट्रपति आरिफ अल्वी र प्रधानमन्त्री इमरान खानले दुर्घटनामा दुःख व्यक्त गरेका छन्। इमरानले दुर्घटनाको छानबिनको आदेश दिएका छन्। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि यस दुर्घटनामा गहिरो शोक व्यक्त गरेका छन्। ट्वीटमा उनले भने, “यस दुर्घटनामा आफ्नो ज्यान गुमाउनेहरूका परिवारप्रति मेरो गहिरो संवेदना।” र म घाइतेलाई चाँडै स्वस्थ राख्न चाहन्छु। पाकिस्तानका सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवाले दुर्घटनामा दुःख व्यक्त गरेका छन् र सेनालाई स्थानीय प्रशासनलाई उद्धार कार्यमा सहयोग पुर्‍याउने आदेश दिएका छन्। लकडाउनको कारण, केही दिन अघि मात्र विमान छुट दिईएको थियो ।
पाकिस्तानी मिडिया रिपोर्टका अनुसार, विमान लैंडिनु भन्दा ठीक अघि कराचीको जिन्ना अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको नजिकै रहेको मोडेल टाउन क्षेत्र नजिकै दुर्घटनग्रस्त भएको थियो । विमान दुर्घटना पछि, कॉलोनीमा धुवाँ देखिएको थियो । दुर्घटना पछि चाँडै राहत र उद्धार कार्य सुरू गरिएको छ। पाकिस्तानी सेना र वायुसेना पनि राहत र उद्धारका लागि आफ्नो टोली पठाएको छ। यस क्षेत्रमा बस्ने २५ देखी ३० व्यक्तिलाई अस्पताल लगिएको छ। सबै नराम्ररी जलेका छन । सिन्धका स्वास्थ्यमन्त्री डा. आजरा र ईधी वेलफेयर ट्रस्टका साद ईधीले भने कि हालसम्म ३७ जनाको शव अस्पताल लगिएको छ। डा. आजराले ३ जना चमत्कारिक रुपले बाँचेको पनि जानकारी दिएका छन्। तीनै जनालाई चोटपटक लागेको छ। पाकिस्तानमा २२ मेदेखि २७ मे सम्म ईदको बिदा घोषणा गरिएको बेला यस्तो दुर्घटना भएको हो ।
Previous articleथप ३० जनामा कोरोना संक्रमण, संक्रमित संख्या ४८७ पुग्यो
Next articleथप ३२ जनामा कोरोना संक्रमण, संक्रमित संख्या ५ सय ४८ पुग्यो